Abiama - Wikipedia
I Abiama na Abia dia mpanjakan' i Jodà izay nandimby an' i Rehôbôama (na Rôbôama) rainy tamin'ny taona 913 tal. J.K. I Asa zanany no nandimby azy rehefa maty izy tamin'ny taona 911. tal. J.K.
2 Olana momba ny reniny
3 Ny tantarany
Amin' ny teny hebreo dia atao hoe אֲבִיָּם / ʾAbiyyām io anarana io (ao amin'ny Tanakh) izay midika hoe "Avy amin' ny ranomasina ny raiko". Atao hoe אֲבִיָּה /ʾAbiyyāh koa izy izay midika hoe "I Iahveh no raiko". Amin' ny teny grika kosa (ao amin' ny Septoajinta) dia atao hoe ᾿Αβιοὺ / Abiou izy. Amin' ny teny latina (ao amin' ny Volgata) kosa dia Abiam. Ny Baiboly prôtestanta amin' ny teny malagasy dia manoratra hoe Abia, izay avy amin' ny teny hebreo hoe ʾAbiyyāh, fa ny Baiboly katôlika amin' teny malagasy dia manao hoe Abiama. izay avy amin' ny teny hebreo hoe ʾAbiyyām.
Olana momba ny reniny[hanova | hanova ny fango]
Tsy fantatra marina ny tena reniny, raha araka ny filazan' ny Baiboly, satria ny Boky voalohan' ny Mpanjaka (1Mpanj. 15.10) sy ny Boky faharoan' ny Tantara (2Tant. 11.20) dia manoratra hoe Maaka (hebreo: מעכה / Ma`akhah) "Maaka zanak' i Absalôma" nefa ny Boky faharoan' ny Tantara (2Tant. 13.2) kosa dia manao hoe Mikaià (hebreo: Mikayahu) "zanak' i Oriela avy any Gibea". Noho ny fanompoany ny andriamanibavy Asera dia nesorin' i Asa zafikeliny tamin' i Maaka ny anaram-boninahiny.
Zanaky ny vady tian-drainy indrindra i Abiama (na Abia) ka notendren-drainy handimby azy (1Mpanj. 15.10-13). Araka ny Boky voalohan' ny Mpanjaka dia mpanjaka be fahotana tahaka an-drainy izy nefa araka ny Bokin' ny Tantara dia mpitari-tafika tia vavaka izy.
Nanjakan' ny ady nifanaovany tamin' i Jerôbôama ny vanim-potoana nanapahany. Ny Bokin' ny Tantara dia mitatitra ny ady teo amin' ny Tendrombohitra Tsemaraima na Zemaraima (2Tant. 13.3-18) izay nifanandrinan' ny lehilahy miisa 400 000 avy amin' i Jodà sy lehilahy 800 000 avy amin' i Israely. Nialohavan' ny lahateny nataon' i Abiama hananarana ny tafik' i Israely izany ady izany.
Ao amin' io lahateny io dia nanome tsiny an' i Jerôbôama i Abiama noho ny nanararaotany ny fahalemen' i Rehôbôama rainy ka naka ny Israelita hiala amin' ny tranon' i Davida, izay taranaka mendrika ny fanjakana satria mihazona ny fampanantenan' Andriamanitra. Nanome tsiny azy indrindra izy ny amin' ny fisarahana ara-pivavahana vokatry ny fivakisana ara-pôlitika sady niampanga an' i Israely ho nanda an' Andriamanitra sy ny asam-pisoronan' ny Levita ka nanolo izany tamin' ny fanompoan-tsampy sy ny mpisorona tsy ara-dalàna. Nanambara ny finoany an' Andriamanitra izay nolazainy fa navelan' ireo Israelita izy ka niangavy azy ireo mba tsy hanatanteraka ny ady satria inoany fa momba ny tafik' i Jodà i Iahveh Andriamanitra.
Niroso tamin' ny ady i Jerôbôama ka nanao fahirano ny tafik' i Jodà nefa nalaky resy (araka ny Bokin' ny Tantara) noho ny fidiran' Andriamanitra an-tsehatra, rehefa nampaneno anjombona (trompetra) ny mpisorona sy rehefa nanao hiaka an' ady mafy ny lehilahin' i Jodà. Lehilahy 500 000 avy amin' i Israely no maty tao amin' izany ady izany, ka nahafahan' i Abiama sy i Jodà naka ampahan-tany tamin' ny fahavalony.
Fokon' i Israely
Fanjakan' i Israely (Samaria)
Fanjakan' i Israely (mitambatra)
↑ Misy fitoviany amin'ny tantaran'ny fanafihana an'i Jerikô (Bokin'i Josoa 6) sy Ay (Bokin'i Josoa 8.14-17) ary Gibea (Bokin'ny Mpitsara 20) io fitantarana io.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Abiama&oldid=1042022"
Voaova farany tamin'ny 19 Desambra 2021 amin'ny 11:43 ity pejy ity.